Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Hotelada & Dalxiiska Wararka » Goobaha Sandals waxaad ubaahantahay oo dhan waa Jacayl
Goobaha Sandals ee jasiiradaha Caribbean-ka waxay bixiyaan fasaxyada ugu fiican ee jaceylka lamaanayaasha isjecel.
Ku raaxayso fasaxyada raaxada ee loo wada dhan yahay ee Sandals Resorts ee Kariibiyaanka oo arag sababta ay u bixiyaan fasaxyada ugu caashaqsan ee lamaanayaasha isjecel oo leh ka-soo-baxyo tayo ka badan kuwa kale ee xeebta raaxada leh.
Dalxiisyada Sandals waxay soo bandhigaan xirmada ugu ballaadhan adduunka ee loo dhan yahay.
Lammaanayaashu waxay ku raaxeysan karaan xeebaha quruxda-cad-quruxda badan, 5-xiddig ee Global Gourmet ™ cunnooyinka, hoyga hodanka ah, cabbitaannada qiimaha leh ee aan xadidnayn, cayaaraha biyaha ee xiisaha leh, iyo inbadan.
Sandals waxay ahayd Shirkadda Hoggaamisa Dhammaan Caalamka ee 25-sano oo xiriir ah Abaalmarinta Safarka Adduunka.
Qiyaas inaad timaado qol gaar ah oo garoonka diyaaradaha ah, oo ay kugu sugayaan gaadiid sugitaan ah, oo aad gelayso goob dalxiis oo gabi ahaanba wax walba lagu daro. Sawir xorriyadda aad ku mari karto makhaayad kasta oo dalxiis oo aad ku raaxeysato wax kasta oo palette aad rabto, ku biirista nashaadaadka aan kaaga baahnayn inaad kala soo baxdo kaarkaaga bangiga ama aad saxiixdo tab, isla markaana aanad xisaabineynin gunno ama abaal marin. Taasi waa raaxada nadiifka ah ee fasax loo dhan yahay. Sandals-ka, wax walba oo loo dhan yahay ayaa xukuma ugu sarreeya.
Xeeb kasta oo xeebta Sandals waxay si toos ah ugu fadhiyaan xeeb qurux badan oo ku taal lix ka mid ah meelaha jasiiradaha ugu quruxda badan ee loo tago Kariibiyaanka, oo ah gobol caan ku ah ballaadhinta-ciidda aan dhamaadka lahayn, biyo quruxsan iyo qorrax madoobaad. Laga soo bilaabo garaacista diirimaadka diiran ee Jamaica ilaa garaacista casriga ah ee Bahamas iyo sharaftii fulkaanaha ee Saint Lucia iyo soo jiidashada qalaad ee Antigua.
Qolalka Kaliya ee Kareebiyaanka ah
Kabaha kabaha waxay leeyihiin hoyga ugu raaxada badan halkaas oo ay ka fekereen wax walba si ay u sameeyaan dib u gurasho ku habboon lammaanaha jacaylka. Laga soo bilaabo Villas-ka biyaha badan-biyoodka ah iyo qolalka jilicsan ee riwaayadaha leh oo leh aragtiyo 180-digrii ah, si aad ugu raaxaysato Skypool Butler Suites oo leh barkado qulqulaya oo aan dhammaad lahayn iyo kuwo gaar ah oo loo yaqaan 'Rondoval Suites', Goobaha Saxeexa Saxeexa ayaa hubaal ah inay kor u qaadi doonaan jacaylka heerarka cusub.
Jasiiradaha Xeebta ee Gaarka loo leeyahay
Iyada oo Sandals ay marti ku yihiin Jasiiradaha Xeebaha ee Xeebta ah waxay helayaan 2 fasax oo kuleyl ah oo loo dhan yahay oo loogu talagalay qiimaha hal. Waxay ku taal Sandals Royal Caribbean iyo Sandals Royal Bahamian kaliya daqiiqado ka soo dalxiis ugu weyn.
Barkadaha Soo jiidashada leh Hawada Jaceylka
Ku raaxe xasilloonida qabow ee barkadaha dhalaalaya. Xado daqiiqado wada jir ah oo xasilloon iyada oo xasilloonida barkadda qaab-dhismeedka bilaashka ah, ku raaxeyso tamarta saxeexyadeena dabaasha-saxeexa, ama la kulan hufnaanta barkadahayaga eber-gelitaanka ee halbowlaha u ah meelaha dalxiiskeenna. Mid kasta oo ka mid ah barkadahayagu waxay leeyihiin shakhsiyad gaar ah qaar badan oo ka mid ahna waxay ka jiraan tallaabooyin badda ka fog.
Aroosyada & Malabka loo dalxiis tago Goobaha Dalxiis ee Dunida ugu jacaylka badan
Sandals-ka, sheekooyinka jacaylka ee martidu waa kuwo gaar ah oo gaar ah… iyo aroosyadooduna sidoo kale. Taasi waa sababta ay ugu beddeleen xirmooyinka arooska qorsheyaasha arooska, iyagoo ka dhigaya khibrad shaqsiyeed mid shaqsiyeed. Dhammaan waxyaalaha dheeriga ah ayaa lagu daray si ay u sameeyaan maalin qaas ah oo xitaa aan caadi ahayn. Marka u sheeg Sandals riyadaada, iyaguna way soo noolaan doonaan.
Sanduuq kasta oo Xidhmada Fasax ah oo Loo Dhan Yahay waxaa ka mid ah: